Imidiya yokuncokola yokuQalisa: UkuSungulwa, ukuSasazwa, iBuzz kunye neBucks | Martech Zone
Imidiya yokuncokola yokuQalisa: UkuSungulwa, ukuSasazwa, iBuzz kunye neBucks
NgoMvulo, Juni 15, 2015 Douglas Karr
Sabelane uluhlu oluhle kakhulu lwe Iindawo ezingama-40 + ukukhuthaza ukuqala kwakho Kuya kufuneka ujonge (kwaye ujonge) njengoko ucwangcisa ukumiliselwa kwesiqalo sakho.
Kukho i-buzz eninzi malunga nokusebenzisa imidiya yoluntu ukukhupha igama malunga nokuqalisa kwakho. Kwaye kuyaqhubeka ukuba nemibono eyonwabisayo kunye noqobo ekusebenziseni. Oku infographic evela Udemy ibonisa indlela wena - njengokuqala - onokunyusa ngayo ukuthengisa kwimithombo yeendaba njengesixhobo sokukhulisa ishishini lakho kwaye kutheni ungafuna ukutyala imali kuqeqesho lweendaba zentlalo ukuze ukhawuleze.
Isitshixo esinye esilahlekileyo apha sithi ukwazisa kwangaphambili. Ukuba uza kuthengisa ukuqala kwakho ngokusebenzisa imidiya yoluntu, ndingakukhuthaza ngenene ukuba ube nenkqubo yokwazisa kwangaphambili kunye nabasebenzisi be-beta ukunceda bobabini bakhe i-buzz malunga nokuqalisa kwakho kunye nokufumana ingxelo engakholelekiyo.
Kudala sisebenza I-CircuPress Kunyaka ngoku kwaye isisiqalo esincinci ngaphandle kokufakwa ngaphezulu kwe-1,500. Ingxelo esiyifumana kubasebenzisi iyamangalisa kwaye siyaqhubeka nokucokisa inkonzo, ukulinganisa iziseko zophuhliso kunye nokulungiselela ukumiliselwa okukhulu kakhulu. Nangona kunjalo, asizukubeka phantsi iitoni zexesha kunye nemali kulwaziso de sazi ukuba inkonzo ilungile- ngokubhekisele kumava omsebenzisi nakwizibonelelo.
Esinye sezitshixo esikhulu abazenzileyo kukumamela ingxelo oyifumana malunga neqonga lakho. Sihlala sibona ukunqunyulwa phakathi kwento yokuqala abacinga ukuba bayayenza xa kuthelekiswa nezinto ezithandwa ngabasebenzisi. Ukugxila kwizibonelelo ezinikezelwa ngabasebenzisi bakho ngengxelo yabo yeyona ndlela ilungileyo yokuzisa ukucacisa uphawu oza nalo ebomini.
Inqaku lokugqibela leengcebiso kukuqinisekisa ukuba unenkqubo yokukhuthaza okanye yokuzibandakanya ekusasazeni, yeyiphi infographic ebiza, igama lokucofa. Uninzi lweziqalo zibona ezo njengezinto eziza kwenziwa kamva emva kokumiliselwa, kodwa siyanyanzela ukuba abathengi bethu bayenze njengenxalenye yokwazisa. Ukwakha uninzi lwezixhobo kamva kunzima, ngakumbi ukuba zifuna ukudityaniswa kwisicelo sakho esisisiseko.
tags: buzzAmajelo eendaba ezentlaloukuguqulwa kweendaba ezentlaloimidiya yoluntu yokuqalisaukuhanjiswa kokuqalisaukuqalisa ukuqalisaintengiso yokuqalisaUdemy
CommerceHub: Yandisa, Nyusa, Gcwalisa kwaye uhlangule
Kutheni kufuneka uhlaziye ikhadi lakho Swayipha uye kwi-EMV